डा. केसीसंगका सम्झौताका बुँदा कागजमै सीमित किन ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रमुख डा. केसीसंगका सम्झौताका बुँदा कागजमै सीमित किन ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आठ वर्षमा १९ पटक अनसन बसेका छन् ।
२१ असार २०६९ मा वरिष्ठताका आधारमा आइओएम डिन नियुक्ती गरिनुपर्ने माग गर्दै उनी पहिलोपटक अनसन बसे । त्यस समय त्रिविले पुनः वरिष्ठताअनुसार डीन नियुक्तिमा आलटाल गरेको भन्दै केसीले दोस्रो पटक २७ साउन २०६९ मा आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे ।
केसी आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, सम्बन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्नेलगायत माग राख्दै अनसन बस्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारले भने उनीस“गको सहमति लत्याउँदै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उनी मंगलबार भर्ना भएका छन् । जनरल वार्डको एनेक्स वानअन्तर्गत ५०१ नम्बर बेडमा उनलाई राखिएको छ । अब केसी उपचार प्रक्रियामा सहभागी हुने छन् ।
गत २९ भदौदेखि जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका केसीलाई मंगलबार काठमाडांंै फर्किलगत्तै सा“झ त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए । केसी अब शिक्षण अस्पतालमै अनसन बस्ने छन् । मंगलबारले अनसन बसेको ९ दिन पूरा भएको छ ।
नेपालगन्जबाट प्लेनमा काठमाडौं फर्किएका केसीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै प्रहरीले कोरोना कारण देखाउँदै केसीलाई ट्रमा सेन्टर लगेको थियो ।
तर, उनले ट्रमामा चेकजाँच नगर्ने अडान लिएका थिए । केसीले ट्रमा सेन्टरबाट मंगलबार साँझ स्वेच्छिक डिस्चार्ज लिएका छन् । ट्रमा सेन्टरमा केसीका समर्थकले ‘वि आर विथ जिकेसी’, ‘डा केसी एक्ला छैनौ, हामी तिम्रो साथ छौं’लगायत नारा लगाए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरिनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकि प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायत माग केसीले राखेका छन् ।
सत्याग्रहमा भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै अनसनलाई निरन्तरता दिएको डा. केसी बताउँछन् ।
यसैबीच, डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालले केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उसले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. केसीले उठाएका सम्पूर्ण जायज माग यथासिघ्र पूरा गर्दै जीवनरक्षा गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरेको हो ।
काठमाडौं । विश्वमा भोकमरी हुने देशमध्ये नेपाल ७३आंै स्थानमा रहेको छ । भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक २०१९ का अनुसार नेपाल विश्वका ११७...
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - May 4, 2020
कला राजधानी समाचारदाता - March 8, 2020
काठमाडौं।संगीतकार जुगल डंगोलको एकल संगीत रहेको नेपाल भाषाको गीतसंग्रह ‘सिरपा’ ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र नासः चोकमा एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘बुदिंया भिंतुना’ कभर...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - February 13, 2020
काठमाडौं । नेपालमै बसेका कुनै नागरिकले कारोना भाइरसको शंका लागेर परिक्षण गर्न चाहेमा तत्काल कोरोना भाइरस परिक्षण गर्न...
खेल एजेन्सी - May 3, 2020
लन्डन । इंग्लिस प्रिमियर लिगका क्लबहरू सिजनका बाँकी खेल सक्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । क्लबका प्रतिनिधिबीच करिब चार घण्टा चलेको छलफलले बन्द रंगशालामा सिजनका...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - June 22, 2020